Nippon Airways niile ghọrọ ụgbọ elu ụgbọ elu izizi na Eshia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Nippon Airways niile ghọrọ ụgbọ elu ụgbọ elu izizi na Eshia
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Ịrụ ọrụ • Technology • Transportation • Akụkọ dị iche iche
Neste na Nippon Airways (ANA), 5-Star nke ụgbọ elu kasị ukwuu na Japan, na-abanye nkwekọrịta nnyefe mmanụ ụgbọ elu (SAF) na-adịgide adịgide. Mmekọrịta a mebiri emebi ga-ahụ ANA ka ọ bụrụ ụgbọelu mbụ jiri SAF na ụgbọ elu na-apụ na Japan ma na-anọchitekwa anya ntinye SAF mbụ nke Neste na ọdụ ụgbọ elu Asia. Omume ndị mbụ ga-amalite site na Ọktọba 2020 dị ka ANA na-ezube ụgbọ elu SAF-ụgbọ elu si Haneda International Airport na Narita International Airport. Nnyefe nke SAF mere ka enwee ike site na mmekorita ya na mmekorita ya na ngwa oru di n'etiti Neste na ulo ahia Japan nke Itochu Corporation.
"ANA na-anya isi na ọrụ onye ndu ya ma bụrụ onye amaara dịka onye isi ụlọ ọrụ na nkwado, yana nkwekọrịta a na Neste na-egosipụtakwa ikike anyị ijere ndị njem aka ma na-ebelata akara ụkwụ carbon anyị," ka Yutaka Ito, Onye isi oche Onye isi na ANA na-ahụ maka ịchụpụta kwuru. . “Ọ bụ ezie na COVID-19 amanyela anyị ime mgbanwe, anyị ka na-agba mbọ imezu ebumnuche anyị nkwado. Anyị ghọtara na ichekwa gburugburu ebe obibi anyị chọrọ ka ụmụ mmadụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nweta otu ebumnuche, anyị nwekwara obi ụtọ na anyị na-eme akụkụ anyị iji chebe ụlọ anyị. Obi dịkwa anyị ụtọ ịkọ na site na ISCC Proof of Sustainability asambodo nke Neste MY Sustainable Aviation Fuel nke enyere na Tokyo na-enye ihe dịka 90% mbepụ gas na-ekpo ọkụ site na ndụ ndụ ya na n'ụdị ya dị mma ma e jiri ya tụnyere mmanụ ọkụ ụgbọ mmiri. "
“Anyị ghotara isi ọrụ SAF ga-arụ iji belata ikuku anwuru nke ikuku, ma na nke dị mkpirikpi ma ogologo. Site na mmekorita ohuru a, anyị na-enye ike ị nweta SAF maka oge mbụ na Asia. Anyị na-asọpụrụ ka anyị na ANA na-arụkọ ọrụ ma na-akwado ha ka ha nweta ebumnuche nkwado ha siri ike, "Thorsten Lange, onye isi osote onye isi maka Renewable Aviation na Neste na-ekwu.
ANA na Neste na-eme atụmatụ ịbawanye mmekorita na 2023 dabere na nkwekọrịta ọtụtụ afọ. Neste nwere ikike kwa afọ nke tọn 100,000 nke mmanụ ụgbọ elu na-adigide. Site na mmeba nke Singapore na ụzọ, yana ego ọzọ enwere ike ịbanye na Rotterdam, Neste ga-enwe ike ị mepụta ihe ruru nde tọn 1.5 nke SAF kwa afọ site na 2023.
Neste MY Sustainable Aviation Fuel na-abụ nke sitere na mmiri na-atọ ụtọ, ihe eji emegharị emepe na ihe ndị ọzọ. Dịka, n'ụdị ya dị mma na n'oge ndụ, ọ nwere ike belata ihe ruru 80% nke ikuku gas na-ekpo ọkụ ma e jiri ya tụnyere mmanụ ụgbọ mmiri. Mmanụ ahụ na-enye ihe ngwọta ozugbo maka ịbelata ikuku anwuru nke ikuku na-efe efe. Enwere ike iji ya dị ka mmanụ na-adafu na injin ụgbọ elu dị ugbu a na akụrụngwa ọdụ ụgbọ elu, na-achọghị itinyekwu ego. Tupu iji, Neste MY Sustainable Aviation Fuel na-agwakọta na fosil ugboelu mmanụ na-ahụ na-gbaara izute ASTM ugboelu mmanụ nkọwa.
ANA kwere nkwa ibelata ihe ọkụkụ 2050 CO2 sitere na ọrụ ụgbọ elu site na 50% ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ 2005. Ọzọkwa, ANA ga-arụ ọrụ iji kpochapụ ihe ọkụkụ CO2 site na arụmọrụ niile na-enweghị ụgbọelu site na mmejuputa usoro nchekwa ume, dị ka iji dochie akụrụngwa ndị ochie na ezigbo usoro ọhụụ dị mma na ngalaba azụmahịa dị mkpa. Ọ bụ ezie na ntiwapụ COVID-19 na-aga n'ihu emetụtala ụlọ ọrụ ụgbọ elu, ANA gbalịsiri ike ịnọgide na-enwe ebumnuche gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya (ESG) maka afọ 2050. Mgbalị ANA enyela aka na itinye ANA na Dow Jones Sustainability Index maka atọ n'usoro. afọ. Site na isoro Neste rụọ ọrụ, tinyekwara na Dow Jones Sustainability Indices na Global 100 ndepụta nke ụlọ ọrụ na-adigide kachasị elu n'ụwa, ANA nwere olile anya ịkwalite ogo mmanụ eji ụgbọelu ya ma mee ka onye ndu ya dị ka ụgbọ elu na-eme enyi.